10 Nzvimbo Dzakawanda Dzakanaka MuNyika | Chengetedza Chitima
musha > Famba Europe > 10 Nzvimbo Dzakawanda Dzakanaka MuNyika
Chitima Kufamba Denmark, Rovedza Kufamba France, Dzidzisa Kufamba Holland, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Poland, Chitima Kufamba The Netherlands, Famba Europe
Yakavigwa kure nemhomho yevashanyi, izvi 10 nzvimbo dzine mavara akawanda munyika, zvinokurudzira zvechokwadi. Vanyori nevanyori vakawana kurudziro munzvimbo idzi dzine mavara. saka, ngano dzinoitika, uye kushanya kune chero yenzvimbo idzi zvirokwazvo kuchave chiitiko chinoshandura hupenyu kwauri zvakare.
1. Nzvimbo Dzakawanda Dzakanaka MuNyika: Nyika shanu, Itari
Grey nguva yechando kana yebhuruu-skied zuva rezhizha, Cinque Terre ine mavara mune chero mamiriro ekunze. Dzimba dzakanaka dzine maonero egungwa rebhuruu uye dzinogadzira mufananidzo wakaisvonaka. Uyezve, musha wese waunoshanyira muCinque Terre une mavara akawanda kupfuura mumwe, nedzimba dzakapendwa yero, pingi, tsvuku, uye toni dzeorenji.
saka, pamwe chete negungwa rebhuruu nezvikomo zvakasvibirira, iyo Cinque Terre dunhu muItari ndeimwe yenzvimbo dzinoyevedza kwazvo pasirese. Rwendo urwu rwakanaka runotanga mudhorobha reLa Spezia, dhorobha hombe rechiteshi uye nzvimbo yekusimuka yeCinque Terre chitima. Kufamba uchitenderera Cinque Terre nechitima yakanakisa sezvo chitima chinopfuura mumwe nemumwe wemisha, saka unogona kuenda uye kudzokera kunzvimbo chero ipi nguva yaunoda mukati mezuva.
2. Tulip Minda, The Netherlands
Pingi, chena, orenji, pepuru, Holland's tulip minda ndeemashiripiti mune ese mavara eiyo muraraungu. Nzvimbo yakanakisa yekuona inoshamisa tulip minda iri muKeukenhof uye unogona kuyemura runako rwemahara. Iyo minda inoshamisa maminetsi gumi nemashanu kufamba kubva kuKeukenhof. zvisinei, runako rusina kujairika runoenderera mberi kwemamwe maminetsi gumi nemashanu kusvika kune akanyanya kunaka tulips.
Unogona kunakirwa neaya mavara akajeka pakati paApril kusvika pakati paMay, panguva ye tulips’ ruva. Iwo makuru tulip minda inguva pfupi kubva kuAmsterdam, saka zvichava zvinoshamisa zuva rwendo kuNetherlands’ mumaruwa. Pamusoro pe, unogona kukwereta bhasikoro senge vagari veko kuyemura maruva anofema.
3. Nzvimbo Dzakawanda Dzakanaka MuNyika: Menton Cote D'Azur, Furanzi
Pamahombekombe akanaka eFrance Riviera, asi kure nepaparazzi muMonte Carlo, Menton iguta rinoshamisa remahombekombe egungwa. Iyo Belle Epoque pastel dzimba, wedzera kune runako rwemusha uno unorota uye mesmerize wese anoshanya kekutanga.
Iwe unogona kusvika kuMenton kubva chero nzvimbo muFrance kana Itari sezvo iri padyo padyo nemuganhu weItari. Cote d'Azur inzvimbo yakanaka muFrance uye inoita nzvimbo yakanaka yekuzorora kuenda. saka, pamusoro pekugadzira mifananidzo mikuru kumashure kweguta rine mavara, kuenda kuchikepe inzira dzakanakisa dzekushandisa zororo rinoshamisa muMenton.
Inonzi guta mukati meguta, ari old city centre Pelourinho muSalvador ndiyo imwe yenzvimbo dzine mavara akawanda pasi rose. Iyo yaimbove nzvimbo yekutengeswa kwevaranda nhasi ndiyo inonyanya kupenya uye inofadza nzvimbo muSalvador. Nzvimbo iyi ine mavara ane mavara ezvivakwa zvekoloni uye inogara maartist, vaimbi, uye hupenyu hukuru hwehusiku.
Uyezve, ane mavara Pelourinho inzvimbo ine tsika dzakawanda kwaunogona kudzidza nezveBrazil neAfrican nhaka. The mumaresitorendi zvikuru muPelo inopa zvinonaka zvikafu kubva kune ese ma cuisine. saka, mushure mekupedza kutenga zvezviyeuchidzo muzvitoro zvakawanda zvakagadzirwa nemaoko zvakapoterera, unogona kuravira zvokudya zvinoshamisa kubva kuAfrica neBrazilian cuisines.
5. Nzvimbo Dzakawanda Dzakanaka MuNyika: Wroclaw, Porendi
Guta rakakura kwazvo muWestern Poland, Wroclaw ndeimwe yematombo akavanzika ePoland. Wroclaw inonakidza kure-kunorohwa-nzira yekuenda mu Europe, uye chivako chayo chine mavara chinoita kuti ive imwe ye maguta dzakanaka mu Europe. Iyo yakanyanya kupenya mavara mukati medieval musika square, uko iwe kwaunogona kutora mukati mehupenyu hwemhepo mune imwe yeresitorendi yakatenderedza.
saka, iva nechokwadi chekubata kamera yako uye shangu dzakanaka dzekufamba dzekufamba kwako mumigwagwa ine mavara uye guta rekare. Kubva panguva yechando kusvika muzhizha, iyo yakajeka Wroclaw inokukwazisa nekutambira kwakanaka, uye pierogi yePoland yakaiswa matapiri, chizi, kana muchero.
6. Burano Island, Itari
Chimwe chezvitsuwa zvitatu zvinozivikanwa pedyo neVenice, Burano ndiyo yakajeka pakati pezvitsuwa zvitatu zvinofadza zveItaly. A chikepe rwendo kure nenyika, Dzimba dzeBurano dzakapenya-pendi dzakanaka off-mwaka kuzororo kuenda. Ipo iwe uchikomberedza chitsuwa mu 2 maawa, unozopedza zuva rese, kungotora mifananidzo.
Dzimba dzevabati vehove dzinoyevedza dziri pedyo nemabhiriji pamwe chete nemigero yakawanda inowedzera kunaka kwaBurano. Izvi zvinowedzera kupositi-senge mufananidzo weimwe yepamusoro 5 nzvimbo dzine mavara muEurope. Kushanyira Burano izuva rakakura rwendo kubva kuVenice, yakakura yekutenga resi uye Aperol masikati zvinwiwa nemaonero eVenetian lagoon.
7. Nzvimbo Dzakawanda Dzakanaka MuNyika: Nyhavn, Copenhagen
Chiteshi chinoyevedza chakambokurudzira mumwe wevanyori vemabhuku makuru evana kuti vanyore Princess uye Pea. Ehe, Aihwa. 20 townhouse yaimbova kumusha kwaDanish Hans Christian Andersen. Nyhavn ine ruvara rwakanga rwuri chiteshi chepakati chinofadza, kwawainzwa vafambisi vezvikepe’ anodana munenge chero mutauro.
nhasi, iyo Nyhavn yakagadziridzwa ndipo apo vagari veko vanouya kuzozorora pakupera kwezuva. Kudya nemimhanzi ye jazz, kuona kunyura kwezuva pamusoro pezvikepe nedzimba dzetaundi dzine mavara, chiitiko chinoshamisa.
8. Guatape, Korombiya
Nemikova, masvingo, uye matenga edzimba ane mavara akasiyana-siyana, Guta reGuatape ndiro guta rine mavara akawanda muColombia. Iri guta rine mavara idhorobha rekuzorora muColombia, ine maonero anoshamisa uye makomo. saka, ive zvinoshamisa maonero yeguta rose nemavara aro, unogona kukwira kuLa Piedra del Penon, uye pamusoro pe 740 nhanho inoshamisa yekuona kwenzvimbo ine ruvara rwakanyanya pasi pano inokuvhurira iwe.
zvisinei, nzvimbo dzakajeka dzetaundi dziri muZocalos, nzvimbo dzepasi dzedzimba. Zocalos zvishongedzo zvakapendwa nemaoko, imwe mifananidzo yemhuka kana yemaruva, uye mamwe anongori marongero ane mavara. Kupedza, kuronga mazuva mashoma’ kuenda kuGuatape saka unogona kuongorora migwagwa inopenya uye ine mavara akawanda munyika.
9. Nzvimbo Dzakawanda Dzakanaka MuNyika: Colmar, Furanzi
Dzimba dzine mavara dzine hafu-timbered, maruva-akashongedzwa migero, Colmar iguta rakanaka reFrance uko ngano dzinouya. Iyo migero yakanaka ichakutungamirira iwe kuburikidza nemikoto inoyevedza kupinda munzvimbo dzakashama. pano, vabati vehove vaigara vachitaura nezvezviitiko zvezuva uye ngano dzegungwa.
Unogona kusvika kuColmar kubva kuBasel kuSwitzerland kana chero guta guru muFrance, nechitima. saka, isa pasi kushanya kuColmar murwendo rwako rwezororo reEurope. Imwe sarudzo yakanaka kushandisa zororo rako rese muColmar chete. Chero nzira, kune zvakawanda zvekuita muColmar kunze kwekutora mifananidzo yenzvimbo ine mavara mazhinji muFrance. Semuyenzaniso, kufamba mugero, kutenga mumusika wakavharwa, uye kuravira waini yeAlsace.
Paris kuenda kuColmar NeChitima
Zurich kuenda kuColmar NeChitima
Stuttgart kuenda kuColmar NeChitima
10. Chefchaouen, Moroko
Vakavigwa mumupata wakasvibira, chete 2 maawa kubva kuTangier, ndiyo yakanakisa uye yakakosha gem Chefchaouen. Yakapendwa yebhuruu nechena, nezvishongedzo zvine mavara, Chefchaouen ndiyo nzvimbo inopenya muMorocco. Zvakafanana neGreek chitsuwa Santorini, migwagwa inoyevedza uye zvivakwa zvinokwezva mufambi akanyanya kunaka.
Ngano dzinoti kusarudzwa kwemavara kwakasiyana kwakatangira muzana remakore rechi15 apo vaJudha vaigara mutaundi duku iri. saka, ruvara rwebhuruu runofananidzira denga uye kubatana kuna mwari. Nepo vanhu vechiJudha havachisiri vagari veguta diki iri, zvisinei nzvimbo yacho yakachengetedza kunaka kwayo mumakore ose. nhasi, guta duku iri rinokwezva zviuru zvevashanyi, saka gadzirira kusangana nemhomho yevanhu inofara kumativi ese eblue kona.
Isu tiri Chengetedza Chitima uchafara kukubatsira kuronga rwendo kuenda ku 10 nzvimbo dzine mavara akawanda munyika.
Iwe unoda kumisa yedu blog positi "10 Nzvimbo Dzakawanda Dzakajeka Munyika" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fmost-colorful-places-world%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Mavara	ColorfulCities	Colorful Places	ColorfulTowns	Mostcolorfulcitiessineurope	nzvimbo dzine mavara zvikuru pasi rose
Mapaki Emvura Akanakisisa MuEurope Kwezororo
Chitima Kufamba Denmark, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Famba Europe
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Germany, Famba Europe
Yakanakisa European Restaurant Michelin Guide
Rovedza Kufamba Britain, Dzidzisa Kufamba Holland, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Spain, Famba Europe